Fandrahonana, fanalambaraka anaty facebook: tratran’ny polisy, naiditra am-ponja ilay tovolahy | NewsMada
Fandrahonana, fanalambaraka anaty facebook: tratran’ny polisy, naiditra am-ponja ilay tovolahy
Fikasana handrahona sy hanalabaraka tovovavy iray tao anatin’ny tambajotran-tserasera sosialy Facebook, tamin’ny alalan’ny kaonty tsy tena izy (compte fake) no nanenjehana ity tovolahy iray (eo amin’ny sary). Saron’ny polisy ny anao lahy, ary efa naiditra am-ponja vonjimaika.
Raha ny fanazavan’ny polisy, nanao “compte fake” (kaonty tsy tena izy entina hisolokiana olona, miafina amina solon’anarana sy endrik’olona hafa) tamin’ny “facebook” ity lehilahy ity ary nampiasa sarin’olon-kafa entina miserasera ao anaty tambajotran-tserasera ka nampiresaka tovovavy iray 18 taona. Roa volana izy no nifanerasera tamin’io tovovavy io tao anaty “facebook” ary nilaza fa mpiasan’ny “finance” ity lehilahy ity. Nandeha teny ny fifaneraserana tao anaty “facebook” ka lasa tian’ilay tovovavy ity lehilahy miresaka aminy ity. Nasain’ilay lehilahy nandefa sary mitanjakana aminy ilay tovovavy ka tsy nihambahamba nandefa sary tokoa ilay tovovavy rehefa resy lahatra tamin’ilay tovolahy. Nangataka fihaonana tamin’ilay tovolahy hatrany ilay tovovavy, saingy nilaza ho tsy afaka noho ny asany ilay lehilahy. Fotoana fohy taty aoriana, nilaza ity lehilahy ity fa efa manambady izy ary tsy afaka miaraka amin’ity tovovavy ity intsony ka nomeny kaonty iray hafa izay misy ny tena sariny. Nolazainy fa io kaonty hafa io no afaka miaraka amin’ilay tovovavy. Tsy nanaiky mihitsy anefa ilay tovovavy satria tsy tiany hono ilay lehilahy amin’ity kaonty hafa ity. Nandrahona azy ilay lehilahy mpanao “compte fake” fa rehefa tsy manaiky hiaraka amin’ilay lehilahy tamin’ilay kaonty hafa nomeny ilay tovovavy dia haparitany ao anaty “facebook” ny sarin’ilay tovovavy.
Ilàna fandanjalanjana ny fampiasana “facebook”…
Tonga nametraka fitoriana teny amin’ny polisy misahana ny fiarovana ny zaza tsy ampy taona sy ny vehivavy (PMPM) ilay tovovavy ka tsy niandry ela ny polisy fa nanao ny fikarohana ilay lehilahy nampiasa kaonty sandoka. Tratra teny Tsimbazaza, ny talata 29 janoary 2019 izy ary niaiky ny heloka vitany nandritra ny famotorana nataon’ny polisy. Ny trangan-javatra toy izao no tena isan’ny manahirana amin’ny fampiasana itony “facebook” itony. Misy lafy tsarany ary misy lafy ratsiny ny fampiasana azy itony. Raha ny lafy ratsiny manokana no jerena dia toy izao fanalam-baraka olona izao. Raha ny lafy tsarany kosa, ohatra ny fanjavonana ankizy tamin’ny alalan’ny “facebook” no nahitana ireo ankizy tsy ampy taona very. Lasa loharano niaingan’ny mpanao fanadihadiana (polisy sy zandary) ny “facebook”. Ilàna fifehezantena, araka izany, ny fikirakirana ny “facebook” fa raha tsy mailo dia izao no lafy ratsiny. Misy miteny hoe akatony any itony “facebook” nefa tsy dia izay loatra satria hatramin’ny mpitondra fivavahana sy ny mpitondra fanjakana aza mampiasa azy itony. “Anjaran’ny ray aman-dreniny ny manara-maso satria maro amin’ireo ankizy no mandefa sary amin’ireny facebook ireny. Tsy ny facebook no ratsy fa ny fampiasana azy no ilàna fandanjalanjana hatrany mba hisorohana ny trangan-javatra mamoafady miparitaka any anatin’ireny tambajotra ireny”, hoy kosa ny fanazavan’ny lehiben’ny sampandraharaha momba ny cybercriminalité eo anivon’ny polisim-pirenena, ny kaomisera Hassan. Tokony ho mailo hatrany, araka izany, ny rehetra amin’ny fampiasana azy ireny. Tokony hahatonga saina ireo zatra manao fihetsika mamoafady sy manala baraka olona koa ny trangan-javatra toy izao. Tokony hahay haka lesona amin’izao koa ny vehivavy ka tsy hanaparitaka sary amin’olona tsy fanta-pototra sy/na taitaitra amin’ny endrik’ireo tovolahy sasany miafina ao anatin’ireny solon’anarana ireny.